Beverage Training Courses in Myanmar - Cellar Door Distribution
ALL PRICES ARE EXCLUSIVE OF 5% COMMERCIAL TAX
Dashboard Change Password Delete Account
Cellar Door Distribution
Cellar Door, the best wine distribution company during the 1st Myanmar Wine Expo, is providing training related to beverage in Myanmar
ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ home / wine knowledge / ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ https://youtu.be/U9dGll5kApcဝိုင်ကောင်းတခွက်ဟာသောက်ဖို့ မိနစ်ပိုင်းပဲကြာပေမယ့် စပျစ်သီးကနေ ဝိုင်ပုလင်းထဲထိ ရောက်ဖို့အတွက် အချိန်ယူရသလို အဆင့်အများကြီးကျော်ဖြတ်ရပါတယ် ဒီလို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအကြာမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားက အေးသာယာ မှ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ
ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်း home / wine knowledge / ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်းhttps://youtu.be/MlVBH_PHEdQဝိုင်ရဲ့အသက်စပျစ်ခက် လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ဝိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ #ကိုင်းဆက်စပျစ်ပင်စိုက်ပျိူးခြင်း ကို အေးသာယာချစ်သူတွေဗဟုသုတရစေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်… We all know that grapes are
ကိုင်းခုတ်စိုက်ပျိုးခြင်း home / wine knowledge / ကိုင်းခုတ်စိုက်ပျိုးခြင်း ဝိုင်ဖြစ်လာဖို့အတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေ အရမ်းများပါတယ် ဝိုင်ကောင်းတခွက်ရစေဖို့အတွက် နောက်ကွယ်ကလုပ်ဆောင်ရတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေက မလွယ်ကူလှပါဘူး အရှေ့တောင်အာရှမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အရင်ကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုကို အခက်အခဲများ စိန်ခေါ်မှုများကြားကပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးဝိုင်အဖြစ်
Ferrarelle home / wine knowledge / Ferrarelle Ferrarelle is the preferred water of Italian families. It starts life in the
EVIAN home / wine knowledge / EVIAN Our water gets its unique cool, crisp taste from its 15 year journey
Boncafe History home / wine knowledge / Boncafe History It was 1962. Mr W. E. Huber,aSwiss National and
No.1-3 Aung San Stadium (North Wing), Gyo Phyu Rd, Mingalar Taung Nyunt Township, Gyo Phyu Street, Yangon.
09772279671, 095031647, 09976532192
Copyright ©2022 By CellarDoor Distribution | Designed by MTG